C/kariin Guuleed “Cunaqabateynta la saaray reer Jubbaland waa Xaqdaro” -
HomeWararkaC/kariin Guuleed “Cunaqabateynta la saaray reer Jubbaland waa Xaqdaro”
C/kariin Guuleed “Cunaqabateynta la saaray reer Jubbaland waa Xaqdaro”
Madaxweynihii hore ee Galmudug C/kariin Xuseen Guuleed oo ka mid ahaa wafuudii shalay gaartay magaalada Kismaayo ayaa ku eedeeyay dowladda Federaalka in cunaqabateyn gardaro ah ay saartay shacabka reer Jubbaland.
C/kariin Guuleed ayaa sheegay inay Kismaayo u tageen ka qeyb galka xaflada caleema saarka Jubbaland, isagoo xusay inay aad uga xun yihiin inay magaalada tageen xilli shacabka reer Jubbaland ay saaran tahay cunaqabateyn gardaro ah.
“Waxaa aad uga xunnahay munaasabada aan ku nimid, xilli shacabka reer jubbaland ay saaran tahay cunaqabateyn gardaro ah, shacabka reer Jubbaland ma qabato cunaqabateyn ma qabto dhibaatada gaarka ah ee lagu haayo, kama qabato dowladooda ayaga dhisteen, dadkii cunaqabateyntaas inay jebiyaan hormuudka u ahaa ayaa ka mid aheyn”ayuu yiri C/kariin Guuleed.
Waxaa uu sheegay in marxaladaha la soo maray iyo meesha laga keenay inay ku timid wada hadal iyo isu tanaasul, isla markaana aanay xilligan dowladnimada ku habooneyn qof kale oo hadli kara ma jiro iyo anaa iri.
Jubbaland ayaa noqotay halka uu ku furanayo geeddiga doorashada 2020/21 oo ay si adag ugu loolamayaan dowladda Federaalka iyo siyaasiyiinta kale ee ka soo horjeeda.